Ngaba umbhali wesiporho makabhale iphepha lesayensi iphepha lePapernerds
Ngaba umbhali wesiporho makabhale iphepha lesayensi
NgoJulayi 9, 2019
, 15: 14
, Yenza umsebenzi wezenzululwazi ubhalwe
Ukubhala iphepha lekota lokufunda kuya kuhamba nawe kuzo zonke izifundo zakho. Eminye imisebenzi yasekhaya ikwaqhutywa phantsi kwegama elahlukileyo
Ixesha lokuqala uya kujongana nekota yekota yesayensi kwisikolo samabanga aphakamileyo. Ngokusisiseko, imalunga nokubhala isiqwenga somsebenzi esingqinelana nenqanaba lesikolo esiphakamileyo, apho unokuthi kwaye kufuneka ubonise ukuba uyakwazi ukwenza oololiwe bakho bokucinga.
Kwiphepha lekota lezemfundo eyunivesithi, uyacelwa kwaye kulindeleke ukuba uhlangabeze iikhrayitheriya zomsebenzi wokufunda. Iphepha lesayensi ke ngoko lisebenza ukujonga ubuchule bakho benzululwazi ngeendlela ezimbini: kwelinye icala, kukuzilawula, kwelinye icala, kuya kufuneka ubonakalise kumhlohli wakho ngokubhala iphepha lesayensi elithetha ukuba ulwakhiwo lwezenzululwazi lube yinto kuwe.
Umsebenzi wesikolo wasekhaya uyafuneka kuzo zonke izifundo - ubuntu kunye nesayensi yendalo. Imigaqo yokufunda-ngakumbi ngokweNkqubo ye-Bologna-imisela ukugqitywa kwamaphepha ekota kwizifundo ezithile kwaye ngamaxesha athile ekhosi. Ngapha koko, imigaqo yokufunda ikhankanya ubungakanani bokugqitywa kwephepha, ixesha ekufuneka ligcwaliswe ngalo iphepha kunye nendlela eliza kuyilwa ngayo. Ubume bomsebenzi buthetha izinto ezisesikweni ekufuneka zibhalwe ngalo igama lesayensi. Imigaqo yokufunda ikwachaza nokuba linobunzima obungakanani iphepha lephepha, okt liphezulu kangakanani ipesenti yamanqaku okugqibela esemester.
Umxholo wephepha lekota yezifundo uhlala unikwa ngumfundisi-ntsapho. Ukuba unesihloko onomdla kakhulu kuso, unokusebenza kuso emva kokubonisana nomhlohli wakho.
Kwiimeko ezininzi, iphepha lekota lezemfundo liyacelwa ukuba ugqibezele izifundo zakho ngohlobo lwe-bachelor's okanye ithisisi yenkosi. Ngezi ntlobo zikhethekileyo zomsebenzi wasendlwini, kulindeleke ukuba ube nakho ukubumba kunye nokusebenza ngesihloko ngokubanzi ngokubanzi. Kwezi meko, umgangatho wesayensi ngokuqinisekileyo uphezulu kakhulu kunamaphepha ekota ekufuneka egcwalisiwe kwisemester nganye.
Iphepha ngalinye lekota yezifundo linomgaqo ofanayo osisiseko. Inyathelo elinye lakha kwelinye. Njengokwakha indlu, eyona nto ibalulekileyo sisiseko. Xa isiseko sizinzile, amanyathelo alula alula.
Inyathelo 1: Nje ukuba isihloko sifunyenwe, kubalulekile ukuba usiqonde kwimeko yonke. Isihloko sinokuchazwa. Umxholo ukwabeka umbuzo wesayensi.
Ngokucaciswa kwesihloko, icandelo elilandelayo sele liphawuliwe: ukujonga ngokubanzi uncwadi ngesihloko. Uphando loncwadi lunokwenziwa ngeendlela ezahlukeneyo: Khangela amagama aphambili kwilayibrari yaseyunivesithi kwaye uhlunge uncwadi olukhoyo. Ukongeza, uphando loncwadi lwenziwa kusetyenziswa iinjini zophando zesayensi zamagama aphambili kwi-Intanethi. Njengethala leencwadi laseyunivesithi, i-intanethi ayisiyazi yonke into. Liqhezu loncwadi olufumaneka naphina emhlabeni elinokufumaneka kwi-Intanethi.
Icandelo elilandelayo lephepha lakho lekota lemfundo libandakanya inkcazo yemigaqo oyisebenzisayo kwiphepha lakho lekota okanye ezikhankanywe ngokuphindaphindiweyo kuncwadi kwisihloko sakho. Inkcazo yekota inikwe umda ikakhulu kumaphepha exesha lezemfundo avela kumacandelo oluntu. Iinkcazo zihlala zizithoba, ngakumbi kwezi zifundo. Kokwakho, oku kuthetha ukuba ekugqibeleni uyavuma kwinkcazo enikiweyo kwaye uyilandele ngokungqongqo emsebenzini wakho. Okanye uyakufumana inkcazo entsha esekwe kuphando lwakho loncwadi, ekufuneka uluthethelele ngokwenzululwazi. Kwelinye icala, isayensi ikunika inkululeko enkulu yokwenza into entsha. Kwelinye icala, kufuneka ube nakho ukuxhasa into "entsha" ngokwesayensi. Uvumelekile ukuba wenze nantoni na kwisayensi! Kuya kufuneka ubenakho ukuzithethelela kwaye ungqine oko ukubandakanyayo okanye ungakuthatheli ngqalelo.
Iyavakala into yokuba ulungiselele izicatshulwa kwezona ngxelo zibalulekileyo ngelixa uphanda uncwadi kwiphepha lakho lekota. Ngamagama acacisiweyo, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba iitekisi azithathwa njengokoqobo, kodwa endaweni yokuchaza. Ewe, umthombo woncwadi ukwangowokushicilela. Kuya kufuneka uchaze oku xa ubhala iphepha lakho lekota. Iikowuteshini zamagama zibonakala ngokungathandabuzekiyo kumaphepha ezifundo. Kuphela zizicatshulwa zomthetho ekufuneka zithathelwe ngokwamazwi, kodwa nangokubonisa ngokuchanekileyo umthombo.
Iphepha ngalinye lekota lilandela iphethini echazwe kwangaphambili:
Intshayelelo: Intshayelelo kwisihloko
Inkcazo yengxaki kunye neenjongo zomsebenzi
Iindlela zokusombulula isisombululo kwithiyori kunye nokusebenza; imeko yangoku yophando
Inxalenye yohlalutyo / iziphumo
Isishwankathelo kunye nembono
Ukongeza, iphepha lekota lokufunda kufuneka libandakanywe
Uluhlu lwamanani kunye neetafile.
Ezi zikhombisi zihlala zihlala ekuqaleni kokubhaliweyo okusebenzayo. Imikhombandlela ayibalwanga kumgangatho opheleleyo wephepha lekota.
Ekugqibeleni kukho ibibliografi, apho lonke uncwadi luluhlu olo ubukhe wabhekisa kulo kokubhaliweyo. Uluhlu lweencwadi alufakwanga kwinani elipheleleyo lamaphepha aza kubhalwa. Oku kunokucaphukisa ukuba uluhlu lweencwadi lubanzi kakhulu. Emva koko ngaphezulu kwe-100 okanye i-150 izingqinisiso zinokudibana ngokukhawuleza kwimisebenzi emikhulu. Nangona kunjalo, amaphepha ali-10 okanye ngaphezulu afunekayo koku ayinakuthathelwa ingqalelo kwinani elipheleleyo lamaphepha.
Ngamanye amaxesha kunokuba yimfuneko ukongeza izinto kwisihlomelo. Ezi zinto zinokuba ngamaphepha odliwanondlebe, imithombo ebalulekileyo okanye izinto ezinje. Nangona kunjalo, izinto ezidweliswe kwisihlomelo kufuneka zihambelane nesicatshulwa. Kwimibhalo esebenzayo, isalathiso sinokwenziwa kwisihlomelo. Ukuba kusetyenziswa izihlomelo, kufuneka zidweliswe kwibhayibhile.
Kuwo onke amaphepha ekota yezifundo zabo, kulisiko ukuba isayinwe i-afidavithi ize ingeniswe kunye nephepha, ichaza ukuba iphepha lalibhalwe ngokuzimela.
Iphepha lokukhusela, elingenalo inani lamaphepha, linolwazi oluninzi:
Kwiimeko ezininzi iphepha lokugubungela linikezelwa yiyunivesithi. Ukuba iyunivesithi ayinaso isampulu, unokuyila iphepha lokufaka ngokwakho ngolwazi olufunekayo. Akukho mida kubuchule bakho. Kwimeko nayiphi na into, iphepha lokugubungela kufuneka libe nesakhiwo esicacileyo. Ukusetyenziswa kwemifanekiso kufuneka kwenzeke kuphela emva kokubonisana nomphathi wesebe lasekhaya.
Injongo yephepha lesayensi ngexesha lokufunda kwakho kukubonisa ukuba ufundile umsebenzi wesayensi. Ngokuhambelana, iimfuno zekota yekota ziphezulu ngakumbi njengoko ukufundile. Ukuba iphepha lesayensi liphela kwizifundo zakho, iimfuno ziphezulu kakhulu. Ngayiphi na imeko, umsebenzi wezenzululwazi ozimeleyo ngalo naliphi na ixesha lezifundo zakho yinto efunekayo yokwenza iphepha lesayensi. Ukuba la manyathelo angentla athathelwa ingqalelo, ukwenza iphepha lekota akuyi kuba ngumthwalo.
Yabelana ngale posti yebhlog
Kuya kufuneka Khumbula Ukushiya uluvo.
Le webhusayithi isebenzisa iAkismet ukunciphisa ugaxekile. Funda ngakumbi malunga nendlela idatha yakho yezimvo eyenziwa ngayo.